मातृ पूजनको महान् पर्व : RajdhaniDaily.com
Home बिचार मातृ पूजनको महान् पर्व
भनिन्छ, ‘मातृदेवो भव’ आमालाई देवता समान मान । यस उक्तिको सन्दर्भ मातातीर्थ औंसीमा गाँसिएको छ । यसरी आमाको महत्व र गरिमालाई प्रकाश पार्दै नेपालमा मातृ दिवस तथा आमाको मुख हेर्ने दिन भनी वैशाख कृष्ण अमावाश्यका दिन मातातीर्थ औंसी मनाउने चलन छ । मातातीर्थ औंसी जन्म दिने आमाप्रति आदर व्यक्त गर्न पौराणिक कालदेखि मनाइँदै आएको महान् पर्व पनि हो । आजको दिन आमाले गरेका महान् र कष्टपूर्ण कामको सम्झना गरिन्छ । आजको दिन आमाप्रति सम्मान र आमालाई सम्झने दिन पनि हो । यिनै आमा जसले हामीलाई संसार देखाइन्, पाइला चाल्न तातेताते गर्दै सिकाइन् । १० महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्माइन् अनि काखमा राखेर पालिन् । देवीकी प्रतिरूप अनि ममता कि खानी अनि बालापनमा हाम्रा हरेक इच्छा, आकांक्षा अनि चाहिएको कुरा पूरा गरिदिने, कल्पवृक्ष सरी, यस पृथ्वी लोकका सम्पूर्ण आमालाई कोटी कोटी नमन छ । मूलतः हिन्दू संस्कृति अनुसार स्त्री जातिमध्ये आमाको स्थान निकै उच्च हुने भएकाले नै हामी आमालाई आदरणीय एवं पूजनीय स्त्री जातिका रूपमा मान्छौं । आमाकै विशेष स्नेह र लालन पालनमा हामी हुर्किएका हुन्छौं । त्यसैले यस दिनलाई बडो धूमधामसँग आमाको सम्झना र मंगलमय कामना गर्दै मनाइन्छ । आमा हुनेहरू वा नहुनेहरूले पनि यस पर्वलाई परम्परागत रूपमा आफ्नो संस्कृतको एक प्रमुख अंगका रूपमा मनाउने प्रचलन चलिआएको छ ।
पौराणिक कालमा हाम्रो संस्कृतिमा आमालाई पाँच भागमा विभाजित गरेको पाइन्छ । जुन मित्र पत्नी, राजपत्नी, गरिबपत्नी, पत्नीमाता अर्थात् सासू र आफ्नी आमा हुन् । त्यसकारण यी पाँचवटालाई नै सामूहिक रूपमा पञ्चमाताको संज्ञाले पुकारिन्छ । शास्त्रीय वाचनअनुरूप यी आमाहरूको आआफ्नो स्थानमा त्यतिकै महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । तिनीहरूलाई हामीहरूको बढी माया मोहका रूपमा बन्दनीय तथा पूजनीय गर्ने परम्परा अद्यावधिकै नै रहेको छ । संसारको सबैभन्दा पवित्र नाता, आमा संसारको सबैभन्दा पवित्र सम्बोधन, आमा हामीमध्ये धेरैले सर्वप्रथम बोल्न सिकेको शब्द, आमा अनि पलपलमा सम्झना आउने, सुख दुःखमा झझल्को आउने एउटा अनुहार, आमा हो । हरेक वर्षको वैशाख कृष्णपक्षको औंसीमा आमाको मुख हेर्ने चलन छ । यस घडीलाई मातातीर्थ औंसी, मातृऔंसी एवं मातृ दिवस पनि भन्ने गरिन्छ ।
यसरी आमाप्रति विशेष भक्ति र भावयुक्त सम्मान गरिएको हुँदा यस दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिन भनिन्छ । यसर्थ बिहान सबेरै उठी स्नान गरी आमालाई उपहार प्रदान गर्ने, मिष्ठात्र भोजन खुवाई आमाको मुख हेर्ने र आशिर्वाद लिने गरिन्छ । आज आमाबाट टाढा रहेका सन्तान आमालाई भेट्न पुग्छन् । आमालाई मीठा खानेकुरा खुवाउँछन् । विवाह गरेर पतिका घर गएका चेलीबेटी पनि मिठा परिकारसहित आमाघर अर्थात् माइत आइपुग्छन् । विभित्र कारणले आमालाई भेट्न नपाएकाले भने सञ्चारका विभिन्न साधनमार्फत पनि सम्झने गर्छन् । यसरी मानिसले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि आमाप्रतिका भावना सम्झना व्यक्त गर्छन् । पौराणिक कालदेखि नै मनाउँदै आएको यो आमाको मुख हेर्ने दिन आमाले गरेका महान् र कष्टपूर्ण कामको सम्झना गरिन्छ । आमा नभएकाहरूले पनि आमाको आत्माको मुक्तिको कामना गर्दै आज श्राद्धतर्पण गरी मातृत्वको स्मरण गर्छन् । आज काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायले भने भक्तपुरको हनुमानघाट पुगी आमाको सम्झनामा परम्परा अनुसार श्राद्ध तर्पण गर्छन् । यदि तपाई पनि आमाबाट पर हुनुहुन्छ भने एकफेर आमालाई फोन गरेर आवाज सुन्ने पो हो कि ? या आमाको याद अनि स्मरण गर्दै साथीभाइसँग आफ्नी आमाको वर्णन र स्नेहको वृतान्त सुनाएर आमाको याद ताजा गर्ने पो हो कि ? जे गर्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुहोस् जगत्को भलो होस् आमाको माया र उहाँले खुवाउनु भएका दूधका धाराप्रति हामी बफादार र इमान्दार हुन जरुरी छ ।
शास्त्रहरूमा आमालाई पिताभन्दा उच्च स्थानमा राखिएको पाइन्छ
मातातीर्थ औंसी जन्म दिने आमाप्रति आदर व्यक्त गर्न पौराणिककालदेखि मनाइँदै आएको महान् पर्व हो
यसरी हिन्दू संस्कृति या विश्वका जुनसुकै धर्ममा पनि आमाको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । यसर्थ हाम्रो देशमा भने आफ्नै मौलिक संस्कृतिका धर्म तथा चाडपर्वको आफ्नै किसिमको गरिमा भएको कुरा स्पष्ट छ । नेपालको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदिको आवश्यक ज्ञान चाडपर्वको अध्ययनबिना अपूरो नै हुने हुन्छ । हिन्दू धर्ममा त्रि ऋण पितृ, ऋषि र देव ऋण चुकाउनु नै मानव मात्रको सर्वप्रथम कर्तव्य मानिएको छ । सो आदर्शको परिचालन उपर्युक्त चाडपर्वमा स्पष्ट रूपले देख्न सकिन्छ । वैवाहिक कार्यद्वारा सन्तान उत्पादन गरी वंश परम्परालाई कायम राख्नुको अतिरिक्त मातृ वा पितृ औंसीका दिन मानिस आफ्ना मातापिताप्रति अपार श्रद्धा, भक्ति अर्पित गरेर पनि पितृ ऋण चुकाउँछन् ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा आजभोलि विभिन्न कारणले आमा बुवालाई वास्ता नगर्ने अनि वृद्धाश्रमलगायत आगन्तुक ठाउँमा लगेर राख्ने चलन बढ्दै गएको छ । जुन मानवताप्रति नै एउटा आक्षेप हो । समय त खोला न हो, आफूले गरेका कुरा आफंैलाई फर्किने समय पनि आउँछ । बगेको समयमा आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनु मानव चरित्र पक्कै होइन है । यसरी अरूको लाख, आमाको काख भनिन्छ । आमाको ममताको अगाडि जुनसुकै मूल्य पनि कम हुन्छन् । तसर्थ, त्यो ममता किनेर पाइँदैन । हाम्रा लागि धर्तीले जति बोझ थामेकी हुन्छिन्, सन्तान र परिवारका लागि आमाले त्यत्तिकै कष्ट सहेकी हुन्छिन् ।
अतः शान्ति, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, दान र दयाको स्रोत मानिन्छ आमालाई । यसर्थ गर्भकालदेखि नै आफ्ना सन्तानप्रति आमाको आत्मिक सम्बन्ध हुन्छ । यद्यपि, आमा भएर पनि आमाको महत्व नबुझ्ने पनि यो संसारमा होलान् । तर ती मानवरूपी धारी मात्र हुन् । यसरी बाहिर ठूलाठूला कुरा गर्ने केही व्यक्ति घरभित्र भने आमालाई हेला गर्ने दृश्य तथा परिदृश्य हाम्रो सामु नभएको घटना भने होइन । यिनै महिमा बोकेकी आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् मातातीर्थ औंसी । शास्त्रमा आमालाई पिताभन्दा उच्च स्थानमा राखिएको पाइन्छ । यसरी श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गरिएकी आमालाई मिठो खान तथा राम्रो लगाउन दिई छोराछोरीले आमाबाट शुभ आशिर्वाद ग्रहण गर्ने चलन छ । आमाप्रति विशेष भक्ति र भावयुक्त सम्मान गरिएको हुँदा यस दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिन भनिन्छ । यस घडीलाई मातातीर्थ औंसी, मातृऔंसी एवं मातृ दिवस पनि भन्ने गरिन्छ ।
आजको दिन आमाप्रति सम्मान र आमालाई सम्झने दिन हो । यसर्थ समष्टि रूपमा अवलोकल गर्दा उल्लेखित पाँच आमामध्ये जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पनि हामी सबैको कर्तव्य त छँदै छ । यसकारणले होला उनीहरूलाई श्रद्धा, आदर, हमेसा गर्नु पर्नेहुन्छ । यस दिन आमा हुनेका लागि आमाको मुख हेर्ने र आमा नहुनेका लागि आमाका सम्झनाको श्रर्दा गर्ने दिन हो । तसर्थ वैशाखकृष्ण औंसीका दिन मातृभक्त आआफ्ना छोराछोरीहरूले श्रद्धा र सम्झना गर्ने महत्वपूर्ण दिन हो । यसैले यस दिन सबै नेपालीहरूले आआफ्नो आमा हुने या नहुने सबैले यो पर्व धुमधामसाथ मनाउने गर्छन् । यसैले होला यो जन्म दिने आमा तथा जन्मभूमि स्वर्गभन्दा प्यारो र पवित्र दिन पनि हो ।
बिचार विश्वनाथ खरेल - April 6, 2020 0
विदेश एजेन्सी - May 14, 2021 0
कला विश्वनाथ खरेल - September 11, 2020 0
जीवनशैली विश्वनाथ खरेल - February 7, 2020 0
प्रदेश ३ विश्वनाथ खरेल - October 3, 2020 0
बिचार विश्वनाथ खरेल - May 11, 2020 0
मुलुकको पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथि वर्षांैदेखि भारतीय पक्षले धावा बोल्दै आइरहेको छ । अहिले फेरि नेपाली भूभागलाई मिचेर लिपुलेक क्षेत्रमा...
प्रदेश विश्वनाथ खरेल - March 12, 2020 0
Breaking News विश्वनाथ खरेल - March 10, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट विश्वभरी संक्रमित भएका १ लाख १० हजार ७७ जनामध्ये ८६ प्रतिशत बढि सामान्य अवस्थामा फर्केका छन् । कोरोनाबाट संक्रमित...
प्रदेश ३ विश्वनाथ खरेल - September 16, 2020 0
बिचार विश्वनाथ खरेल - April 2, 2020 0
हाल विश्व नै कोरोना भाइरसको संक्रमणले त्रसित अवस्थामा छ । हाम्रो मुलुकमा पनि संघीय सरकारले मुलुकव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेको छ । यस अवस्थामा चाहेर...
विश्वनाथ खरेल - June 18, 2021